जनताले सांसद खोज्न संसद भवन जाने कि जेल ? - Himalayan Kangaroo
जनताले सांसद खोज्न संसद भवन जाने कि जेल ?
Posted by Himalayan Kangaroo | २३ पुष २०७५, सोमबार ०४:५० |
बोल्ने तरिका गलत भए होला तर शेरबहादुर तमाङले वास्तवमा सत्य नै बोलेका थिए । तर नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिन लगाईयो र उनले दिए पनि । अहिले नेपाल वायुसेवा निगमको वाईड बडी विमान खरीद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएकै हो । यसबारेमा लेखा समितिले गठन गरेको छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिबेदन पनि बुझायो तर सरकारले त्यो प्रतिबेदन मान्दिनँ भनेर अर्को छानबिन समिति बनाउने भन्नु सिधै भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने नियत हो । शेरबहादुर तमाङसँग नैतिकता खोज्नेहरुले रविन्द्र अधिकारीसँग नैतिकता खोज्न नपर्ने कस्तो खालको हाईब्रिड नैतिकता हो ? लेखा समितिको प्रतिबेदन मान्दिन भन्ने कस्तो खालको लोकतान्त्रिक सरकार हो ?
बंगलादेशमा पढ्न गएका केही बिद्यार्थीहरु परीक्षामा पास हुनुपर्ने बाध्यताले मास्टरसँग सुते होलान् , कोही नेपालमा पनि सुत्लान , बेलायत , अमेरिका , अष्ट्रेलिया गएर पनि आर्थिक बाध्यताले गर्दा यौन ब्यापार गर्ने नेपाली चेलीहरु थुप्रै छन ! नेपालमै पनि राजनीतिक पद वा नियुक्ति पाउन नेताहरुसँग अनैतिक बसउठ गर्ने थुप्रै होलान ! सहमतिमा गरिने हरेक सम्बन्ध समान्य हो र यसमा मेरो कुनै बिमती छैन ।
थुप्रै प्रहरीहरु जिउदै जलेका छन, बालकलाई समेत गोली हानेर हत्या गरिएको छ । त्यही हत्यामा आरोपितलाई जेलबाट निकालेर फुलमाला लगाएर सपथ खुवाएर सांसदको लोगो लगाईदिएर फेरि जेलभित्र हुल्ने यो कस्तो कानुनी राज्य हो ? अब जनताले सांसद खोज्न संसद भवन जाने कि जेलतिर ? मान्छे मारेको अभियोगमा जेलमा बसेको मान्छेले सांसदको लोगो लगाएर तलव भत्ता खान पाईन्छ ?
महिला प्रहरीले निर्मलाको लाशबाट सुरुवाल फुकालेर पानीमा धोएको भिडियो नै छ ! प्रहरीको काम प्रमाण संकलन गर्ने हो कि नष्ट गर्ने ? प्रमाण नष्ट गरेको देख्दा देख्दै पनि त्यही प्रमाण नष्ट गर्नेलाई समातेर केरकार गर्ने कि पुरै गाउँको डिएनए टेष्ट गर्दै हिंड्ने ? सरकार यो कस्तो खालको आधुनिक अनुसन्धान हो ?
देश चाहिं धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्ने अनि सरकारले चाहिं कुनै एउटा धर्मको सह आयोजक भएर धार्मिक कार्यक्रम गर्न पाईन्छ ? जनप्रतिनिधिहरुलाई आर्थिक प्रलोभन देखाएर होली वाईन खुवाउन पाईन्छ ?
कुनै एउटा पत्रकारले मन्त्रीले बुझाएको सम्पत्तिको बिवरणमा झुट समातेर प्रश्न सोध्दा जागिर चट पार्न पाईन्छ ? जनतालाई कर थोपरेर जनप्रतिनिधिहरुका लागि सुख सुबिधा गाडी भत्ता सुरक्षाका नाउमा अर्वौ उडाउन पाईन्छ ? के यसैका लागि राजा फालेर गणतन्त्र ल्याईएको हो ? यातायात काण्ड,सुन काण्ड,काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने काण्ड, एनजिओ आइएनजीओको सम्पत्ति छानबिन गर्ने काण्ड लगायतका थुप्रै काण्डहरु खोई कता हराए ? सरकारसँग जवाफ छ ?
Previousगाउँमा बस्दैनन् जनप्रतिनिधि, कार्यालयको काम सहरका चिया पसल र डेराबाट
Nextअष्ट्रेलियाको पीआरको सम्भावना सहितका ११७ पेशाको सूची सार्वजनिक
अष्ट्रेलियाको मेलबर्नमा लोकप्रिय कलाकारहरुको प्रस्तुति सहितको ‘तीज मेला २०७५’
१० श्रावण २०७५, बिहीबार ०६:१०
जहाजलाई पार्किङको अभाव, अकाशमै ‘होल्ड’ हुन बाध्य
२९ माघ २०७४, सोमबार ०१:५८
पोखरामा पर्यटकको अवैध धन्दा
८ चैत्र २०७३, मंगलवार ००:२४
नेपाली नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा अष्ट्रेलियाको प्रमुख विपक्षी दलका नेताले दिए शुभकामना
३० चैत्र २०७४, शुक्रबार ११:२०